Ogaden News Agency (ONA) – Wafti uu hoggaaminayo Gudomiye ku xigeenka JWXO oo lakulmay hawlwadeenka jaaliyada London
Wafti uu hoggaaminayo Gudomiye ku xigeenka JWXO oo lakulmay hawlwadeenka jaaliyada London
Wafti uu hoggaaminayo gudomiye ku xigeenka JWXO Mudane Maxamed Ismaaciil ayaa la kulmay maanata oo Axada (10.05.2015) hawlwadeenka jaaliyada Ogadeniya ee London. Waftigan oo ka koobnaa Mudane Axmad Yaasin Sh Cabdi hoggaanka Abbaabulka Bulshada iyo Adeega dadweynaha iyo Xildhibaan Xassan Macalin iyo xildhibaan Cusmaan badal oo kamida hoggaanka saree ee HAU.
Shirkan waxaa furay gudoomiyaha Jaaliyada London Mudane Yuusuf Jaamac oo kusoo dhaweeyay madaxda saree e JWXO shirkan. Gudomiyaha ayaa sidoo kale soo bandhigay warbixin kooban oo ka hadlaysa waxqabadka Jaaliyada London.
Mudane Maxamed Ismaacil, gudomiye Ku xigeenka JWXO ahna Hoggaanka HAU ayaa warbxin dhinacyo badan taabanaysa la wadaagay hawlwadeenka Jaaliyada London. Gudoomiye kuxigeenka ayaa ka warbixiyay tayada jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee ka jira qurbaha. Isaga oo aad u amaanay dadaalka iyo awooda xooga badan ay muujiyeen jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee ka howlgala dibadaha.
Gudomiye ku xigeenka JWXO waxa uu aad u amaanay ururka Haweenka Somalida Ogadeniya isaga oo sheegay in London ay tahay ururka haweenka Ogadeniya goobtii uu ka bilowday inay tahay London. Waxuuna aad u boggaadiyay dallada guud ee loo sameeyay haweenka somalida Ogadeniya. Gudomiye ku xigeenka ayaa sidoo kale amaan dheer u soo jeediyay ururada bulshada Somalida Ogadeniya gaar ahaan jaaliyada Ogadeniya ee London oo uu ku tilmaamay inay kamidyihiin tiirasha ugu waaweyn ee halganka somalida Ogadeniya.
Gudomiye ku xigeenka ayaa hadalkiisa qiimiga badnaa waxuu ku daray in wadanka Ingiriisku ahimiyad gooni ah u leeyahay qadiyada somalida Ogadeniya. Waa dalkii guumeysan jiray dhulkeena, waana dalkii sida sharcidarada ah ugu gacan galiyay dhulkeeni hooyo gumeystaha madow ee Abbysinia. Waa dal siyaasada aduunka saameyn weyn ku leh.
“Waxaan aad usoo dhaweynaynaa Abaabulka aad ka dhex wadaan Aqalka Baarlamaanka Ingiriiska, arintaas waa inaad xoojisaan hadaad tihiin jaaliyada London oo saameyn ku yeelataan siyaasiyiinta iyo bulshada Britain” Sidaas waxaa yiri gudomiye ku xigeenka JWXO. Gudomiyaha ayaa sheegay in wadamada ree galbeedka waxyaalaha fikirkooda wax ka badala waa waxyaalaha ay aqristaan ama arkaan sidaas awgeed waa inaydaan ka daalin sidii qadiyada Ogadeniya aad u gaadhsiin laheydeen.
Mudane Axmed Yaasin Sh Cabdi Hogaanka Abbaabulka Bulshada iyo Adeega Dadweynaha ayaa soo jeediyay siminaar aad u xiiso badan oo ku aadan sidii aqoonta bulshada somalida Ogadeniya kor loogu qaadi lahaa islamarkaasna Saboolnimada loola daggaalami lahaa iyo aqoon darida. Mudane Axmed yaasin ayaa sidoo kale siminaarkan kaga hadlay Tabaha ugu haboon ee bulshada somalida Ogadeniya loo gaadhsiin lahaa Samafalka iyo taagerada lasiiyo aggoonta iyo bugtadada somalida Ogadeniya.
Mudane Axmed yaasin waxaa uu shirkan kusoo bandhigay Buug Cusub oo kor u qaadi doona ururnimada hawlwadeenka jaaliyadaha somalida Ogadeniya. Buugaas oo aad loo soo dhaweeyay waxa uu diirada saaraya sida gudomiyaha HABAD sheegay tayaynta shaqada islamarkaasna hagi doona shaqa wanaaga.
Xildhibaan Xassan macalin ayaa ka hadlay Siyaasada gumeysiga Ethiopia gaar ahaan muccaaradka Ethiopia iyo khilaafyada ka dhex jira taliska woyanaha. Mudane Maxamed Macalin ayaa Siminaar dheer oo ka hadlaya sidii loogu diyaar garoobi lahaa burburka Ethiopia usoo bandhigay hawlwadeenka jaaliyada London.
Xildhibaan Cusmaan Badal ayaa isna kahadlay marxalada Ethiopia ku sugantahay waqtigan.
Kulankan oo Xubno badna oo kamida jaaliyada London kasoo qeyb galeen siminaaradan kadib waxaa si qoto dheer loo gorfeeyay oo laga doodey sidii loogu diyaar garoobi lahaa buburka kusoo fool leh Dalka Ethiopia. Waxaana hoosta laga xariiqay in xoog badan la galiyo Abaabulka jaaliyadaha Ogadeniya iyo taageerada halganka Somalida Ogadeniya.
Gudomiye ku xigeenka JWXO oo safar dheer ku maraya Jaaliyadaha Ogadeniya ee Europe ayaa socdaalkiisa la filaya innuu ku gaadho gobolada Dalka UK gaar ahaan Jaaliyada Birmingham iyo Jaaliyada Manchester todobaadkan soo socda